Internal Links Zvakanaka Kune Zvimwe Zvinhu, asi Kwete Kuita Kuti Site Yako Iwedzere! -SEO Nenyanzvi Kubva Semalt, Natalia Khachaturyan
Nhengo dzepakati dzakakosha mukubatsira vashandisi kuenda kune imwe peji yewebsite kune imwe. Vanoita basa rinokosha mukupa mukana wekushandura wevashandi. Izvi zvinoshandisa zvinangwa zviviri zvakakosha mu kutsvaga injini optimization (SEO) - sol republic ultra deck. Chokutanga, mukati mehutano ndezvemhosva yekuita shanduro yekutsvaga injini kugona mapeji muwebsite yako. Uyewo, hutano hwehukama mumapeji ako hunobatsira pakusarudza peji yako. Nhamba yehutano hwemukati hunoendesa kune peji inopa injini dzekutsvaga chiratidzo chekufanirwa kweji peji.
Chigadziro Chine Zvinyorwa kubva ku Semalt , Natalia Khachaturyan, anotsanangura kuti mukati memajeri anobva pane rimwe peji kuenda kune rimwe nzvimbo yakakubatsira kuti uende kunzvimbo. Ivo vanewo basa rekugadza hurumende zvichienderana nekukosha kweruzivo runobatwa pawebsite inopiwa. Izvi zvinobatsirawo pakuparadzira simba rehutungamiri panzvimbo dzepaiti.
Pamusoro pe SEO ranking, injini dzinotsvaga dzinofanira kuona zvinyorwa uye hutano hwemashoko makuru uye kuti zvakashandiswa sei. Kuti kuita zvinhu zvive nyore, injini yekutsvaga inoda chikwata chekubatanidza chinokambaira chinobatsira kuti ichitarise nzira dzenzvimbo kuti dziwane mapeji ose ewebsite. Iko kukanganisa kwakaipisisa iyo mawebsite akawanda ari kuvanza kubatana kwekutanga kana kuiviga nenzira iyo injini yekutsvaga isingagoni kuwana. Izvi zvinodzivirira mapeji kubva pakurongeka muhurukuro dzejini yekutsvaga. Mapeji acho angave ane zvinyorwa zvakanakisisa uye mazwi makuru, asi Google haazozvizivi, saka, havangabatsiri pakurongwa kwewebsite yako.
Yakanakisisa yebasa rekushandura iyo ndiyo ine nhamba shomanana yezvibatanidza pamapeji ekutanga uye mamwe mapeji. Izvi zvinobvumira simba rekuisa ruzivo runoyerera munzvimbo yose iyo inowedzera kusarudzwa kwese peji.) Kuti uite izvi, unofanirwa kushandisa shanduro dze URL dzekuwedzera uye dzekubatanidza mukati. Iyi fomu inonzwisiswa kune injini dzinotsvaga sezvinongoita kutevera.Spider injini yekutsvaga iyo inotsvaga mapeji ose kuti avagadzirire kuisa. ndizvo zvikonzero nei mamwe mapeji angave asingachagoni kuwanikwa saka haana kunyorwa iyo anosanganisira:
Izvo zvinogona kunge zvakagadzirwa nezvinhu zvakadai semhando yekuderedza-pasi kana kuongorora kwakazara. Izvi zvinogona kudzivisa tsananguro yekutsvaga kuti isasvike kuhutano kana zvigadzirwa zvichiita kuti zvionekwe kune injini dzinotsvaga.
Links dzinogona kuwanika chete kuburikidza nepamabhuku ekutsvaga mukati
Tsandanyama haikwanise kuwana zvinyorwa zvakavanzwa mushure mekutsvaga mabhokisi ekutsvaga mukati, uye saizvozvo, mapeji akadaro haazokanganiswa.
Links mu plug-ins
Izvi zvinosanganiswa hazvisviki nevanjini.
Kana mapeji akavharwa ne robot.txt kana Meta robots tag
Matikiti aya emetetti uye robot.txt anoita kuti spider isasvike pane peji.
Mazano ari pamapepanhau ane mazano akawanda
Izvi zvinoderedza kukwana kwekutsvaira kwezvinjini. Icho, saka, kuchenjera kuve nechokwadi kuti peji rimwe nerimwe rine mapeji makumi mapfumbamwe nemazana matanhatu iwe unogona kudzivirira mamwe mapeji kuti arege kutamba.
Kudzivisa zvinotaurwa zvinowedzera kukwanisa kwegandanyama yekutsvaga kutamba kumapepu ose achivabvumira kuverengerwa seO ranking. Iva nechokwadi kuti unoisa zvinhu izvi mukufungisisa paunenge uchitora mukati mako mazano.